Kufirwa Kwatakaitwa naJesu Kunotiwanisa Upenyu Husingaperi
Chipo Chakasiyana Nezvimwe
JORDAN akapiwa shapena yepenzura yakaita sechikepe. Inoita sechinhu chisingakoshi asi Jordan anoida zvisingaiti. Jordan anoti, “Ndakaipiwa ndichiri mudiki nevamwe sekuru vainzi Russell, uye vaiwirirana chaizvo nemhuri yedu.” Pavakafa, Jordan ndipo paakazoziva kuti sekuru ava vainge vabatsira chaizvo vabereki vake nasekuru vake, baba vakabereka amai. Jordan anoti, “Kuziva izvi, kwakaita kuti ndiwedzere kukoshesa chipo ichi.”
Nyaya yaJordan inoratidza kuti vamwe vanhu vanogona kusaona kukosha kwechipo. Asi munhu wacho anenge apiwa anenge achichikoshesa chaizvo. Bhaibheri rinotaura nezvechipo chinokosha chaizvo richiti: “Mwari akada nyika kwazvo zvokuti akapa Mwanakomana wake akaberekwa ari mumwe oga, kuti munhu wose anotenda maari arege kuparadzwa asi ave noupenyu husingaperi.”—Johani 3:16.
Chipo ichi chinogona kuita kuti munhu awane upenyu husingaperi! Pane chipo chingapfuura ichi here? Vamwe vanhu vangatadza kuona kukosha kwechipo ichi, asi vaKristu vechokwadi ‘vanochikoshesa.’ (Pisarema 49:8; 1 Petro 1:18, 19) Asi nei Mwari akatuma Mwanakomana wake kuti azotifira?
Muapostora Pauro anotaura chikonzero chacho achiti: “Chivi zvachakapinda munyika nomunhu mumwe chete uye rufu zvarwakapinda nechivi, saizvozvowo rufu rwakapararira kuvanhu vose.” (VaRoma 5:12) Adhamu haana kuteerera Mwari uye ndizvo zvakazoita kuti afe. Vanhu vose vari kufa nemhaka yekutadza kwake.
“Mubayiro wechivi ndirwo rufu, asi chipo chinopiwa naMwari achishandisa Kristu Jesu Ishe wedu ndihwo upenyu husingaperi.” (VaRoma 6:23) Kuti tisunungurwe parufu, Mwari akatuma Mwanakomana wake Jesu Kristu kuti azotifira. Kufa kwakaita Jesu, kunonzi “rudzikinuro,” ndiko kunoita kuti vose vanotenda maari vazowana upenyu husingaperi.—VaRoma 3:24.
Chibayiro chaJesu Kristu ndicho chinoita kuti vashumiri vaMwari vawane makomborero akawanda. Pauro paaitaura izvi akati: “Mwari ngaaongwe nokuda kwechipo chake chepachena chisingarondedzereki.” (2 VaKorinde 9:15) Chibayiro chaJesu chinoshamisa chaizvo zvekuti hatikwanisi kunyatsochitsanangura. Pazvipo zvose zvakanaka zvatinopiwa naMwari, nei rudzikinuro rwuchinyanya kukosha? Rwakasiyana nezvimwe zvipo pakudii? * Uye tinofanira kuitei nezvatakaitirwa? Verenga nyaya mbiri dzinotevera unzwe kuti Bhaibheri rinopindura sei mibvunzo iyi.
^ ndima 8 Jesu akazvipira ‘kupa upenyu hwake nokuda kwedu.’ (1 Johani 3:16) Asi sezvo kufa kwaakaita kuchibatsira kuzadzisa chinangwa chaMwari, nyaya dzinotevera dziri kunyanya kutaura zvakaitwa naMwari kuti rudzikinuro urwu rwuvepo.